Tratra Ny Ezaka Saika Hanafenana Ny Hitsaka Nataon’ny Solika Tao Pero · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2015 4:54 GMT
Vokatra amin'ny tontolo iainana amin'ireo fitrandrahana solika ataon'ny orinasa Pluspetrol ao amin'ny vondrom-piarahamonina Jose Olaya, mitoetra ao amin'ny faritanin'i Datem del Marañon, Loreto. Sary: Julio Angulo – La Republica (nahazoana alalana)
Namela holatra lehibe any Pero ny indostrian'ny solika sy entona, izay na ireo manampahefana ihany aza dia nanaiky ny fisiany. Taorian'ny 40 taona nitrandrahana solika tany Loreto, nanambara ny hamehana ho an'ny resaka tontolo iainana sy fahasalamana ny governemanta, ao amin'ireo dobo efatra mitoetra manodidina ny ampahan-tany 192 (ex 1AB) ao amin'ny faritra Amazonia, izay iasan'ny orinasa Pluspetrol Norte. An-taonany maro izay, nitaraina ny amin'ny vokany tsy re tsaika sy hita mivantana amin'ny fiainan'izy ireo, ireo mponina teratany.
Convoca, gazety mpanao fandihadiana any Pero, dia afaka nahazo ny tatitra fanarahana ny “hydrocarbure” eo amin'ny tontolo iainana, izay tsy naseho vahoaka ary tsy noraharahian'ireo governemanta telo teo aloha na teo aza ny fahalebiazan'ny porofo. Taorian'ny nijerena antontan-taratasy misy pejy 20.000 ary nanamboarana taratasin-draharaha ho an'ireo faritra 21, mitondra aminareo ny tantara ry Gabriela Flores sy Milagros Salazar mpanoratra. Nalefa voalohany tao amin'ny Convoca io ary naverina nalefa ato amin'ny Global Voices miaraka amin'ny fahazoan-dàlana.
Manaraka ny takaitra navelan'ny solika ao Amazonia Peroviana i Wilson Sandy, miaraka amin'ny fahaizan'ny mpikaroka mpanadihady iray ary ny fahavononan'ireo te-hiaro ny fonenany: ny faritra Achuar an'i Loreto. 39 Taona izy, ary efa maherin'ny folo taona izay, nanolotra ny fiainany tamin'ny fanangonana porofonà fandotoana ataon'ireo orinasanà solika izay miasa ao amin'ny faritr'i Amazonia izy, miaraka amn'ireo takaitra maro tavela amin'ny tontolo iainana ao amin'ny firenena. Nahoana izy no manao io? “Mba hiaro ireo rahalahiko, mba hanadihady ny zava-mitranga, amin'izay ireo olona hafa tsy hiteny hoe mandainga izahay,” hoe i Sandy amim-pahatokiana tanteraka mitovy amin'ny fanaony rehefa mitety ny ala, ny renirano ary ireo farihy maintin'ny solika mba hanangona porofo amin'ireo zava-maniry malazo sy trondro maty. Marihan’ i Sandy amin'ny GPS ireo toerana niharan'izany, ary alainy sary sy lahatsary mba hampisehoana ny zavatra hitany.
Lehiben'ireo 19 mpitsirika ny tontolo iainana ao amin'ny Renirano Corrientes ao Loreto i Sandy. Fa tsy izy irery akory no vavolombelona amin'ny antsoiny amin'ny fiteny Achuar hoe nunka nemeskamu: ny tany tratry ny aretina. Miaina miaraka amin'ny fanariana solika, entona miparitaka ary zavatra hafa ratsy amin'ny tontolo iainana, izay matetika no alevina ao amin'ny alabe matevina efa ho am-polo taonany maro ireo mponina teratany. Tohivakan'ireo tantara tsy re tsaika io, izay lavitry ny fiahiahiana mihitsy.
“Nahita tatitra fanaraha-maso an-jatony tsy mbola voakitka izahay tao amin'ireo baoritra maro misy ny antontan-taratasy,” hoy ny fanazavan'ny mpisolovava, Maria Luisa Egusquiza, izay tomponandraikitry ny Fanatanterahana, Famaizana ary Fanentanana ao amin'ny Sampandraharahan'ny Masoivoho Fanadihadiana sy Fanatanterahana ny Tontolo iainana (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA), tao aminà tafatafa niaraka tamin'ny Convoca ny tapatapaky ny taona 2014. Niresaka ireo porofon'ny fisian'ny fanitsakitsahana ny tontolo iainana izay tsy mbola nojeren'ny manampahefana mihitsy mba hanasaziana ireo orinasa tomponandraikitra. Iza ireo orinasa ireo, ary inona no lazain'ireo antontan-taratasy?
Nanomboka hatramin'izany, nihevitra izay hamaliana ireo fanontaniana ireo ny Convoca ary nitady ny hoe inona no tao anatin'ireo baoritra nifanaingina teo anjoron'ny biraon'ny OEFA ireo. Nanamafy i Egusquiza fa nangatahan'ny sampan-draharahany ny mpanara-maso ao amin'ny Repoblika mba hanao fanadihadiana amin'ireo tomponandraiki-panjakana, fa tsy nanome andinindininy misimisy kokoa amin'ilay tafatafa anefa izy, izay natrehan'i Hugo Gomez, filohan'ny OEFA ihany koa. Ankehitriny, taona iray aty aoriana, aborakay ny ampahany voalohany amin'ity tantara ity.
Ny zavatra hitanay dia, voalohany indrindra, antontan-taratasy misy pejy 20.000 mikasika fanitsakitsahana ny tontolo iainana ataon'ireo orinasa mpitrandraka solika sy angovo. Tafiditra taminà antontan-taratasy feno maherin'ny 1.000 ny Convoca, isan'izany ireo tatitra momba ny fanaraha-maso ny tontolo iainana, ireo taratasim-pifandraisana anatiny sy sary izay tsy navoaka ho hitan'ny daholobe.
Namakafaka sy nanangana antontan-taratasy momba ilay raharaha ny Convoca mba hamaritana ny maharatsy be ireo tranga miseho, ireo mpandraharaha, ary ireo tomponandraikitra. Valin'izany, hita fa mahavoarohirohy ireo asa fitrandrahana solika sy entona ao amin'ny faritra 21 ao amin'ny firenena ny 70 isan-jaton'ireo tranga miseho, ary ny orinasa Arzantina Pluspetrol no tena misonanika indrindra amin'izany, izy no mpandraharaha lehibe indrindra ao Pero ary ny orinasa sangay amin'ny mpanitsakitsaka ny tontolo iainana.
Tanànan'i Jose Olaya (Loreto). Sary: Julio Angulo – La Republica.
Nampirimina tao anatin'ny 23 andro ireo raharaha rehetra ireo, teo anelanelan'ny Aogositra 2013 sy Septambra 2014, tamin'ny fandraisan'ny Sampan'ny Mpanome toromarka sy Fikarohana an'ny OEFA fanapahan-kevitra miisa 1.101, tsy ho noho ny tsy fahampian'ny porofo akory, fa satria navelan'ireo manampahefana hihoatra ny fetra farany izay efatra taona izy ireo, mba hanombohana ny fepetra fanasaziana aorian'ny fanangonana ny porofo voalohany. Antsoina hoe fotoana fiandrasana io fangatahana io.
Nampiseho ireo tatitra avy aminy tamin'ny Masoivoho Mpanaramaso ny Fampiasam-bola ao amin'ny Angovo sy ny Fitrandrahana ambanin'ny tany (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Osinergmin) teo anelanelan'ny taona 1998 sy 2009, ireo mpitsirika, araka ny voasoratra ao amin'ireo taratasy voarain'ny Convoca.
Nampirimina avy eo ireo tatitra ireo teo anelanelan'ny taona 2002 sy 2013, nandritra ny governemantan'i Alejandro Toledo, Alan Garcia sy Ollanta Humala. Ny voalohandohan'ny taona 2011, naharay tatitra avy any amin'ny Osinergmin ny OEFA, rehefa nampihatra indray ny lalànan'ny hydrocarbure amin'ny tontolo iainana io.
Mponin'ny tanàna Jose Olaya. Sary: Julio Angulo – La Republica.
Fony nisahana io raharaha io ny Osinergmin, namela ny 98 isan-jaton'ireo tranga hijanona tao anatin'ny roa ka hatramin'ny 13 taona izy. Nanao toy izany ihany koa ny OEFA tamin'ireo tranga 20 najanona tao anatin'ny roa taona fotoana nanaovany ny fanaraha-maso ny tontolo iainana ao amin'io faritra io. Tsy nisy dingana fanasaziana ara-pitantanana noraisina, na nahita tranganà fanitsakitsahana ny tontolo iainana lehibe tokoa aza ireo manampahaizana.
Ny fanaparitahana 50.000 barikanà solika avy tao amin'ny fantsona fitrandrahana solika any Pero avaratra, an'i PetroPeru, no iray amin'ireo tranga ireo, izay nifarana tao amin'ny Renirano Marañon ny 25.000, toeram-ponenana ho an'ireo biby karazany zato, mitoetra eo anelanelan'i Jaen sy ny Amazonia. Nitranga tamin'ny marainan'ny 8 May 2006 io, satria nitontonan'ny vato milanja 25 taonina teo amin'ilay fantsona fitrandrahana ; nahazo ny halavan'ny tanàna Fatima sy Chingaza io nony farany, ka nahavoa ireo koa. Araka ny tatitra mitondra ny laharana. 79426-1, tsy nitatitra “fahasimbana tao amin'ny tobin-drano, ary ny lavan'ny Renirano Marañon” ilay orinasa, ary namela ireo mponina tao amin'ny tanàna hanangona ireo vokatra voasimban'ny solika, nefa tsy nanao fiarovana.
Porofon'ny fiparitahan'ny soliky ny PetroPeru avy tao amin'ny fantsona ao amin'ny faritra Peroviana Avaratra, ny taona 2006, tafiditra tao anatin'ny tatitra fanaraha-maso nampirimina.
Noho io antony io, nanome sosokevitra ireo mpanaramaso hoe tokony hanaovana fanombanana“ ireo fahapotehana mivaingana, amin'ny lafiny zava-maniry sy ara-tsosialy,” “marihina tsara ireo faritra misy firotsahana tany” ary tokony hametraka drafitra hanamboarana ny simba. Tsy zavatra ratsy nitranga fotsiny io. Ho an'ilay manampahaizana momba ny vokatra manapoizina Ruben Loayza, avy ao amin'ny Anjerimanontolo Cayetano Heredia, ataony ho “loza lehibe ho an'ny tontolo iainana” io fiparitahana io, noho ny habetsahan'ny solika niparitaka tao amin'ny renirano, fa nohadinoina nandritra ny dimy taona anefa ilay tatitra, ary ny taona 2013, nampirimin'ny OEFA ilay izy, niaraka tamin'ireo tatitra miisa 1.100, satria efa tapitra ny fotoana afaka hanaovana ny fanadihadiana sy hanomezana sazy.
Ezaka fiaraha-miasa ny fanangonana ireo antontan-taratasyvoalaza ireo. Ireto avy ireo nitondra ny anjara birikiny : Esteban Valle-Riestra, Aramís Castro, Gloria Alvitres, Wendy Vega sy Claudia Risco.